I-DUBAI: Isibonelo Sentuthuko | Imisebenzi - Umsebenzi - Ukuhamba usuka e-Zero uye ku-Hero!
Iziqu Zokuphefumula zikaSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Kunzima ukukholelwa nokuthakazelisa ukuthi i-Dubai yahamba
Imithombo: Izithombe ze-Dubai ku-1960 naku-1970s bonisa umuzi njengendlela yokuthuthukiswa kwehlane: I-Clocktower nxazonke eziseduze neDeira imizwe ngehlabathi ...
Kule ndawo emangalisayo
Futhi namanje ishukumisayo, nsuku zonke kukhona ushintsho olusha endaweni. Lesi sifundazwe sase-United Arab Emirates sibonelo esiyingqayizivele salokho esikubiza ngokuthi intuthuko. Eminye yonke yezwe iyamangala kakhulu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi indawo ephelele yokungena, indawo enesihlabathi nengasalayo ibe yilokho namuhla. Ngaphandle kwanoma yimiphi imithombo nobuchwepheshe, leli dolobha lishintsha ngalezi zinselele futhi linqobe labo abanemibala endizayo. Kuyangipha uma ngizama ukucabanga ukuthi bekuyoba nzima kanjani ukuthola lesi siqu ukuthi sinayo yonke emasimini ukuthi kube okwenza imisebenzi yayo siqu, ukwakha i-infrasture yezinga eliphezulu emhlabeni kanye nezobuchwepheshe.
Indawo okokuqala egcinwe ukudoba kanye nokuhamba nge-pearl iminyaka eyinkulungwane, kanye namarekhodi okuqala edolobheni okwenziwa ku-1799 ngenkathi iBani Yas clan isungula njenge-dependence ka-Abu Dhabi.
I-Dubai yaba i-Sheikhdom ehlukile e-1833 lapho umbuso wase-Al-Maktoum wawuthatha ngokuthula. Ukucindezeleka Okukhulu kwe-1929 kubangele ukuwa emakethe yamazwe angaphandle, uSheikh Saeed efuna enye imithombo engenayo futhi umema amaNdiya kanye nabathengisi base-Irani lapha ngaphandle kokukhokha intela. Ngamafutha atholakala ku-1966, leli zwe lashintsha ngaphandle kokuqashelwa futhi laholela e-Dubayali libe yindawo edabukisayo, yesimanje, yebhizinisi. Cha, noma yiliphi elinye izwe lingacabanga ukuthi lapho idolobha elingenalutho leGulf lizodlala indima enkulu emnothweni wezwe.
UHH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum
Okwamanje, uSheikh Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum ungumengameli we-United Arab Emirates kanye nombusi we-Emirate of Dubai kanye nomkhandlu wakhe wezikhonzi basebenzela ngokunamandla ukugcina izinga futhi benze kube namandla amakhulu okusebenzisana nokusebenzisana kwamazwe ngamazwe.
Umphumela omuhle wemikhankaso yabo ukuqaliswa kwe-EXPO 2020, izosingathwa yi-Dubai eyanikezwa yi-The Bureau International Des Expositions General Assembly eParis ngoNovemba 27, 2013. I-Expo kulindeleke ukuthi yengeze inani eliyingqayizivele lezingcolile emnothweni we-Dubai ne-UAE.
Leli zwe futhi lizosebenza njengemagnet omkhulu emakethe yezomnotho.